Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka oo si toos uga socda Akadeemiyada General Kaahiye
August 28, 2012 - Written by
Muqdisho:-Waxaa si toos ah u socota wareega koowaad ee codaynta doorashada Guddomiyaha Baarlamaanka, codaynta ayaa waxaa saaka ka qayb qaadanaya ilaa 228-ka mid ah oo iyagu loo dhaariyey ka mid noqoshada Golaha Baarlamaanka ee lagu asteeyey in uu jiro mudo 4 sanno ah. Xilibaano lagu balansanaaa in saaka la dhaariyo ama ay ku soo biiraan Golaha Baarlamaanka ayaan iyagu weli qayb ka ahayn codaynta socota waxaan xilibaanda laga reebay liiska waxaa ay gaarayaan ilaa 20 xilibaan.
Kulanka mudaneyaasha baarlamanka oo waxaa uu ka dhacayaa Akadeemiyada General Kaahiye waxaan xilka guddoomiyaha baarlamaanka u tartamaya ilaa 5 xilibaan oo kala ah Dr Cali Khaliif Galeyr, Prof Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari, C/rashiid Maxamed Xidig iyo Maxamed Rashiid, Xassan Abshir Faarax. Waxaa kale oo kulanka lagu dooranayo guddoomiyaha Baarlamaanka DFS ka qayb galaya xubno ka tirsan beesha caalamka wakiilo kale duwan oo ka socda Qaramada Midoobey ,Midowga Yurub ,Midowga Afrika iyo urur goboleed IGAD.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa aad loo adkeeyey waxaan saaka la arkayey ciidanka AMISOM iyo kuwa DFS oo baaraya dad weynaha iyo gaadiidka, ilaa hadda lama saadaalin karo cid ku soo baxaysa guddoomiyaha baarlamaanka DFS oo siyaasiyiintu ay aad ugu tartama yaan walow beesha caalamku ay u astaysay qofka noqonay guddoomiyaha Baarlamaanka , Madaxweynaha iyo weliba Ra’iisul wasaaraha sidda dad badan oo soomali ah ay qabanaa.
244,180 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress